> Resource> Utility> Gịnị bụ bootmgr & otú ndozi bootmgr njehie
Ọtụtụ ndị na-adịghị nyochawa kpọrọ ndị maara nke mkpa nke bootmgr. The okwu bootmgr na-ezo aka buut njikwa faịlụ na Windows, ma ọ bụrụ na ọ na-aga na-efu ị pụrụ na-enwe nsogbu mgbe malite gị PC.
Ndị na-adị bootmgr nke bụ na ọ bụ nanị bụghị ebe ahụ, kama na ọ na-emebi ma ọ bụ merụọ n'ụzọ ụfọdụ. The PC ga-enwe ike ịbanye Windows, ma n'ihi na ọ nwere ike ịhụ echichi, n'ihi na ọ na-agbalị ka buut si a na diski ike na e emerụ ma ọ bụ na n'ụzọ kwesịrị ekwesị ahazi, ma ọ bụ n'ihi na Windows onwe ya e emerụ. Mgbe njehie abịa na ihuenyo ọ chọrọ ka a rụziri, ma ị ga-enwe ike iji mara na os.
Buut njikwa faịlụ nwere ike ịbụ na-emerụ ma ọ bụ ehichapụ mmadụ na mberede. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọjọọ sectors na buut oru nke siri ike mbanye, ndị a nwekwara ike ịkwụsị Windows si n'idebata n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-eme ka njehie ozi. Otu bụzi ihe mgbe ochie BIOS ma ọ bụ a na-adịbeghị anya Windows nweta nkwalite nwekwara ike ịbụ ọrụ, dị ka ike na-ekwesịghị ịdị na ntọala gị na PC.
Nsogbu nwekwara ike nje na-akpata, a jiri MBR ma ọ bụ ihe ọjọọ sectors na draịvụ ike. Ndiiche shutdowns nwekwara ike ịkpata a nke. Ịnwere ike iji aka ịrụ ọtụtụ ihe iji Windows utilities, ma nke a nwere ike ịbụ tricky ọrụ na ọtụtụ ikpe njehie ozi ga-egosi na ị na-apụghị Ibu Ibu usoro anya n'ime nsogbu.
Wondershare PowerSuite Golden na-abịakwute nnapụta n'ihi na nke a na ọtụtụ ndị ọzọ nsogbu site a ahụkarị PC ọrụ. Ọ ga-Malitegharịa ekwentị Windows n'ihi na ị na-agba ọsọ a zaa nke ndekọ na idozi kpọmkwem ihe bụ nsogbu bụ, na mgbe ahụ idozi ya. The menus na nhọrọ ndị dị mfe iji na nke a dị ike ịba uru kwesịrị nọ na-esote onye ọ bụla PC iji hụ ezigbo ịrụ ọrụ.
Copy faịlụ, igosi keukwu backups, na ịtọọ oge mgbe ahụ ike ndenye ego na-gị PC na-agba ọsọ were were na Wondershare PowerSuite Golden.
Tọghata NTFS ka abụba maka gị na-enweghị Data Loss